Madaxweynaha Jubbaland oo tababr usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR JUBALAND Madaxweynaha Jubbaland oo tababr usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland oo tababr usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland.
Previous articleWasaradda Gaadidka XFS oo ku howlan horumarinta garoomada diyaaradaha dalka.
Next articleIlhaan Cumar iyo Xildhibaanno kale oo dacwad ka gudbiyay Askar falal xun kula kacay Dad Muslimiin ah.